Maxaynu raacayso tareen? safarka tareenka waxaa lagu nasto, wax ku ool ah iyo waxay bixisaa arrin bulsho oo hababka kale ee gaadiidka fudud ma u dhigma karaa. Si kastaba ha ahaatee, safraya naafada ah waxay noqon kartaa dhib in qaar ka mid ah. Tani macnaheedu maahan inaadan ku raaxeysan karin baashaalka, in kastoo. article Tani waxay bixisaa qaar ka mid ah meelaha aasaasi ah oo aad u baahan tahay inaad tixgelin marka la qorshaynayo aad safarka tareenka sidaas u safraya naafada ah ee Europe waa dhib yar.
Waa kuwee Tababarka Qaadashada A-Tren haddii aad la safreyso naafo?
Safarka Gaarka ah leh adeegga iinta kala duwanaan karaan mid ka mid ah gobolka in kale, iyadoo kuxiran dhowr shuruudood; baabuurta on tareen gaar ah, goobaha ee kala duwan ee saldhigyada wadada aad marayso, iyo xitaa siyaasadahaaga side ee helitaanka.
Akhri Tigidhadaada oo Ogow Wadadaada intaad ku safreyso naafo
Si taxaddar leh u baar tikidhadaada iyo safarkaaga markii aad hesho. Hubi in aad tahay raaxo leh siyaasadaha iyo qodobada ay si aadan yaabay aad istaagaan kala duwan (gaar ahaan marka safar dibada).
Boorsooyin Dheeraad ah markaad ku safreyso naafo
Ka dheerow meelaha ugu heli karo ee magaalada. Tani waa mid ka mid ah qaybaha ugu adag ee qorshaynta safarkaaga tareenka intaad la socoto iinta. Waxaa laga yaabaa inaad ka heli hotel a la gaari karo weyn, laakiin waxa aad ka heli doontaa marka aad ku socotaan / hirgaliyo albaabka hore? Ma jiraan buuro iyo jaranjarada jiho kasta? waxaad yeelan doontaa in uu hirgaliyo badan cobblestones? Ma jiraan maqaayado heli karo dhow? Waa muhiim in baaritaan xaafadda hoteelka. Waxaad isticmaali kartaa Google Maps Street View si aad u hesho jiifay ee dalka, markaas email hotel la su'aalahaaga.
Waxaad ka dalban kartaa tikidhada tareenadaada Tareenada ugu dhaqsiyaha badan ee Europe on Save-A-tareenka in ku dhow caga kasta ka sarreeya diiwaangeliso 3 daqiiqo, at the heerka tigidhada tareenka ugu jaban iyo gargaartay ajuurada jaale isnacsiiyeen!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta?, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-disability-europe%2F%0A%3Flang%3Dso- (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)